08.09.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– आफ्नो दिलमा हात राखेर सोध – बाबाले जे सुनाउनु हुन्छ , त्यो मै ले पहिला जाने को थि एँ ? जे सुनेका छौ त्यसलाई अर्थसहित बुझेर खुसी मा रहने गर।”
तिम्रो यस ब्राह्मण धर्ममा सबैभन्दा बढी तागत छ– त्यो कुनचाहिँ हो र कसरी?
तिम्रो यो ब्राह्मण धर्म यस्तो हो, जसले श्रीमत अनुसार सारा विश्वको सद्गति गरिदिन्छ। ब्राह्मणले नै सारा विश्वलाई शान्त बनाउँछन्। तिमी ब्राह्मण कुलभूषण देवताहरू भन्दा पनि उच्च हौ। तिमीलाई बाबाद्वारा यो शक्ति मिलेको छ। तिमी ब्राह्मण बाबाको सहयोगी बन्छौ, तिमीलाई नै सबैभन्दा ठूलो ईनाम मिल्छ। तिमी ब्रह्माण्डको पनि मालिक र विश्वको पनि मालिक बन्छौ।
प्यारा रूहानी सिकीलधे बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ। रूहानी बच्चाहरूले जानेका छन्– रूहानी बाबा अवश्य एकैपटक हरेक ५ हजार वर्षपछि आउनु हुन्छ। ‘कल्प’ नाम राखिदिएका छन्, त्यसैले भन्नुपर्छ– यो ड्रामाको अथवा सृष्टिको अवधि ५ हजार वर्ष छ, यी कुरा एक बाबाले नै बसेर सम्झाउनु हुन्छ। यो कहिल्यै पनि कुनै मनुष्यको मुखबाट सुन्न सक्दैनौ। तिमी रूहानी बच्चाहरू बसेका छौ। तिमीले राम्रोसँग जानेका छौ– हामी सबै आत्माहरूका बाबा उहाँ एक हुनुहुन्छ। बाबाले नै बसेर बच्चाहरूलाई आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, जुन कुनै पनि मनुष्य मात्रले जानेका छैनन्। कसैलाई थाहा छैन, गड वा ईश्वर के वस्तु हो, जबकि उहाँलाई गड फादर भन्छन् त्यसैले धेरै प्यार हुनुपर्छ। बेहदको बाबा हुनुहुन्छ त्यसैले अवश्य उहाँबाट वर्सा पनि मिल्छ। अंग्रेजीमा अक्षर राम्रो छ, हेवनली गड फादर। हेवन भनिन्छ नयाँ दुनियाँलाई र हेल भनिन्छ पुरानो दुनियाँलाई। तर स्वर्गलाई कसैले जानेका छैनन्। संन्यासीले त मान्दै मान्दैनन्। उनले कहिल्यै पनि यस्तो भन्दैनन्, बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। हेवनली गड फादर– यी अक्षर धेरै मीठा छन् र हेवन प्रख्यात पनि छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा हेवन र हेलको सारा चक्र, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान बुद्धिमा फिर्छ, जो जो सेवाधारी छन्, सबै त एकरस सेवाधारी बन्दैनन्।
तिमीले फेरि आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। तिमीले भन्छौ, हामी रूहानी बच्चाहरू बाबाको श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत अनुसार चलिरहेका छौं। उच्च भन्दा उच्च बाबाको नै श्रीमत हो। श्रीमद् भागवत गीतामा पनि गाइएको छ। यो हो नम्बरवन शास्त्र। बाबाको नाम सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै वर्साको याद आउँछ। यो दुनियाँमा कसैले पनि जान्दैन, गड फादरबाट के मिल्छ। अक्षर त भन्छन् ‘प्राचीन योग’। तर जानेका छैनन्, प्राचीन योग कसले सिकायो? उनीहरूले त कृष्ण नै भन्छन् किनकि गीतामा कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ– बाबाले नै राजयोग सिकाउनु भयो, जसबाट सबैले मुक्ति-जीवनमुक्ति पाउँछन्। यो पनि जानेका छौ– भारतमा नै शिवबाबा आउनु भएको थियो। उहाँको जयन्ती पनि मनाउँछन् तर गीतामा नाम गुम हुनाले महिमा पनि गुम हुन गएको छ। जसबाट सारा दुनियाँलाई सुख शान्ति मिल्छ, उहाँ बाबालाई बिर्सेका छन्। यसलाई भनिन्छ नै एकज भूलको नाटक। ठूलो भन्दा ठूलो भूल हो बाबालाई चिनेका छैनन्। कहिले भन्छन्– उहाँ नाम रूपबाट भिन्न हुनुहुन्छ, फेरि भन्छन्– कछुवा-माछा अवतार लिनुहुन्छ, ढुंगा-पत्थरमा हुनुहुन्छ। भूलमाथि भूल हुँदै जान्छ। सिंढी झर्दै जान्छन्। कला कम हुँदै जान्छ। तमोप्रधान बन्दै जान्छन्। ड्रामाको योजना अनुसार जो बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, जसले स्वर्गको मालिक बनाउनु भयो, उहाँलाई ढुंगा-पत्थरमा हुनुहुन्छ भनिदिन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– तिमी सिंढीबाट कसरी उत्रिंदै आयौ, कसैलाई केही पनि थाहा छैन। ड्रामा के हो, सोधिरहन्छन्। यो दुनियाँ कहिलेदेखि बनेको हो? नयाँ सृष्टि कहिलेदेखि थियो भनेर सोधेमा भनिदिन्छन्– लाखौं वर्षदेखि थियो। सम्झन्छन्– पुरानो दुनियाँ त अझै धेरै वर्ष बाँकी छ, यसलाई अज्ञान अन्धकार भनिन्छ। गायन पनि छ– ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया, अज्ञान अन्धेर विनाश। तिमीले जानेका छौ– रचयिता बाबाले अवश्य स्वर्ग नै रच्नुहुन्छ। बाबा नै आएर नर्कलाई स्वर्ग बनाउनु हुन्छ। रचयिता बाबा नै आएर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनु हुन्छ। आउनु पनि हुन्छ अन्त्यमा। समय त लाग्छ नि। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, ज्ञानमा यति समय लाग्दैन, जति यादको यात्रामा लाग्छ। ८४ जन्मको कहानी त एक कथा जस्तै छ, आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला कसको राज्य थियो? त्यो राज्य कहाँ गयो?
तिमी बच्चाहरूमा अब सारा ज्ञान छ। तिमी छौ कति साधारण, अजामिल जस्ता पापी, अहिल्या, कुब्जा, भिल्लहरूलाई कति उच्च बनाउनु हुन्छ। बाबा सम्झाउनु हुन्छ– तिमी केबाट के बनिरहेका छौ। बाबा आएर सम्झाउनु हुन्छ– अब पुरानो दुनियाँको अवस्था हेर, कस्तो छ? मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्– सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ? बाबा भन्नुहुन्छ– तिमीले आफ्नो दिलमा हात राखेर सोध– पहिला यो केही जानेको थिएँ? केही पनि जानेका थिएनौ। अहिले जानेका छौ– बाबा फेरि आएर हामीलाई विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ। कसैको बुद्धिमा आउँदैन, विश्वको बादशाही भनेको के हो? विश्व अर्थात् सारा दुनियाँ। तिमीलाई थाहा छ– बाबाले हामीलाई यस्तो राज्य दिनुहुन्छ जसलाई आधाकल्प कसैले पनि हामीबाट खोसेर लिन सक्दैन। त्यसैले बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबासँग कतिपटक राज्य लिएका छौ। बाबा सत्य हुनुहुन्छ, सत्य शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। कहिल्यै सुनेका छैनौ। अहिले अर्थ सहित तिमीले जानेका छौ। तिमी बच्चा हौ, बाबालाई त याद गर्न सक्छौ। आजकल सानो उमेरमा नै गुरु बनाउँछन्। गुरुको चित्र पनि बनाएर गलामा लगाउँछन् वा घरमा राख्छन्। यहाँ त आश्चर्य छ– बाबा, शिक्षक, सद्गुरु सबै एउटै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मैले साथमा लिएर जान्छु। तिमीसँग सोध्छन्– के पढ्नुहुन्छ? भन, हामीले नयाँ दुनियाँमा राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि राजयोग पढ्छौं। यो हो नै राजयोग। जसरी बेरिस्टर योग छ भने बुद्धिको योग अवश्य बेरिस्टरतर्फ नै जान्छ। टिचरलाई अवश्य याद त गर्छन् नि। तिमीले भन्छौ– हामीले स्वर्गको राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि नै पढ्छौं। कसले पढाउनु हुन्छ? शिवबाबा भगवान। उहाँको नाम त एउटै छ, जुन चलिआएको छ। रथको नाम त छँदै छैन। मेरो नाम नै हो शिव। बाबा शिव अनि रथ ब्रह्मालाई भनिन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ– यो कति आश्चर्यजनक छ, शरीर त एउटै छ। यिनलाई भाग्यशाली रथ किन भनिन्छ? किनकि शिवबाबाको प्रवेशता छ भने त अवश्य दुई आत्मा छन्। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, अरू कसैलाई यो ख्याल पनि आउँदैन। देखाउँछन्, भागीरथले गङ्गा ल्याए। के पानी ल्याए? अहिले तिमीले यथार्थमा देख्छौ– के ल्याउनु भएको छ, कसले ल्याउनु भएको छ? कसले प्रवेश गर्नुभएको छ? बाबाले गर्नुभयो नि। मनुष्यमा पानी कहाँ प्रवेश गर्छ र? जटाबाट कहीं पानी निस्कन्छ र? यी कुरामा मनुष्यहरूले कहिल्यै सोच्दा पनि सोच्दैनन्। भन्ने गरिन्छ– धर्म शक्ति हो। धर्ममा तागत छ। बताऊ, कुन धर्ममा सबैभन्दा बढी तागत छ? (ब्राह्मण धर्ममा) हो, यो ठीक छ, जति पनि तागत छ त्यो ब्राह्मण धर्ममा नै छ। अरू कुनै धर्ममा कुनै तागत छैन। तिमी अहिले ब्राह्मण हौ। ब्राह्मणहरूलाई तागत मिल्छ बाबाबाट, जसबाट फेरि तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। तिमीसँग कति ठूलो तागत छ। तिमीले भन्छौ– हामी ब्राह्मण धर्मका हौं। कसैको बुद्धिमा बस्दैन। विराट रूप त बनाएका छन्, तर त्यो पनि आधा छ। मुख्य रचयिता र उहाँको पहिलो रचनालाई कसैले जान्दैन। बाबा हुनुहुन्छ रचयिता, अनि ब्राह्मण हुन् चोटी। यसमा तागत छ। बाबालाई याद गर्नाले तागत मिल्छ। बच्चाहरू त अवश्य नम्बरवार नै बन्छन् नि। तिमी यस दुनियाँमा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हौ। देवताहरू भन्दा पनि उच्च हौ। तिमीलाई अब तागत मिल्छ। सबैभन्दा धेरै तागत छ ब्राह्मण धर्ममा। ब्राह्मणले के गर्छन्? सारा विश्वलाई शान्त बनाउँछन्। तिम्रो धर्म यस्तो छ जसले श्रीमतद्वारा सबैको सद्गति गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– तिमीलाई आफू भन्दा पनि उच्च बनाउँछु। तिमी ब्रह्माण्डको पनि मालिक, विश्वको पनि मालिक बन्छौ। सारा विश्वमा तिमीले राजाई गर्छौ। अहिले गायन गर्छन्– हाम्रो देश महान्। कहिले महिमाको गीत गाउँछन्, फेरि कहिले भन्छन्– भारतको के हालत छ....। जानेका छैनन् भारत कहिले यति उच्च थियो? मनुष्यले त सम्झन्छन्– स्वर्ग नर्क यहीँ छ। जोसँग धन, मोटर आदि छ, ऊ स्वर्गमा छ। यो जानेका छैनन्– स्वर्ग भनिन्छ नै नयाँ दुनियाँलाई। यहाँ सबै कुरा सिक्नु छ। विज्ञानको सिप पनि फेरि त्यहाँ काममा आउँछ। यो विज्ञानले पनि त्यहाँ सुख दिन्छ। यहाँ त यी सबैबाट मिल्छ अल्पकालको सुख। त्यहाँ तिमी बच्चाहरूको लागि यो स्थायी सुख हुन जान्छ। यहाँ सबै सिक्नु छ जुन फेरि संस्कार लैजान्छौ। कुनै नयाँ आत्मा आउँदैनन् र त्यहाँ सिक्दैनन्। यहाँका बच्चाहरूले नै विज्ञान सिकेर त्यहाँ जान्छन्। धेरै होसियार हुन्छन्। सबै संस्कार लिएर जान्छन् जुन फेरि त्यहाँ काममा आउँछ। अहिले छ अल्पकालको सुख। फेरि यी बम आदिले नै सबैलाई नष्ट गरिदिन्छन्। मृत्यु बिना शान्तिको राज्य कसरी हुन्छ? यहाँ त अशान्तिको राज्य छ। यो पनि नम्बरवार सम्झन्छन्– हामी पहिला आफ्नो घर जान्छौं फेरि सुखधाममा आउँछौं। बाबा त सुखमा आउनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई पनि वानप्रस्थ रथ चाहिन्छ नि। भक्तिमार्गमा पनि सबैका कामनाहरू पूरा गर्दै आएको छु। सन्देशीहरूलाई पनि देखाएको छु– कसरी भक्तहरूले तपस्या पूजा आदि गर्छन्, देवीहरूलाई सजाएर, पूजा आदि गरेर फेरि समुद्रमा डुबाइदिन्छन्। कति खर्च हुन्छ। सोध, यो कहिलेदेखि सुरु भएको हो? तब भन्छन्, परम्परादेखि चलिआएको हो। कति भड्किइरहन्छन्। यो पनि सबै ड्रामा हो।
बाबा बारम्बार बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ, म तिमीलाई धेरै मीठो बनाउन आएको छु। यी देवताहरू कति मिठा हुन्छन्। अहिले त मनुष्यहरू कति तिता छन्। जसले बाबालाई धेरै मदत गरेका थिए, उनीहरूकै पूजा गरिरहन्छन्। तिम्रो पूजा पनि हुन्छ, पद पनि तिमीले उच्च प्राप्त गर्छौ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ– म तिमीलाई आफू भन्दा पनि उच्च बनाउँछु। उच्च भन्दा उच्च हो भगवानको श्रीमत। श्रीकृष्णको त भनिदैन। गीतामा पनि श्रीमत प्रख्यात छ। कृष्णले त यस समय बाबासँग वर्सा लिइरहेका छन्। कृष्णको आत्माको रथमा बाबाले प्रवेश गर्नु भएको छ। कति आश्चर्यजनक कुरा छ। कहिल्यै कसैको बुद्धिमा आउँदैन। बुझेकाले पनि बुझाउन धेरै मेहनत लाग्छ। बाबा कति राम्ररी सम्झाउनु हुन्छ। बाबा लेख्नुहुन्छ– सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तिमीले उच्च सेवा गर्छौ त्यसैले यो ईनाम मिल्छ। तिमी बाबाको सहयोगी बन्छौ त्यसैले सबैलाई ईनाम मिल्छ– नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। तिमीसँग पनि ठूलो तागत छ। तिमीले मनुष्यलाई स्वर्गको मालिक बनाउन सक्छौ। तिमी रूहानी सेना हौ। तिमीले यो ब्याज लगाएनौ भने मनुष्यहरूले कसरी थाहा पाउन सक्छन्, यी पनि रूहानी सेना हुन्। सैनिकले सधैं ब्याज लगाएका हुन्छन्। शिवबाबा हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको रचयिता। त्यहाँ यी देवताहरूको राज्य थियो, अहिले छैन। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ– मनमनाभव। देह सहित सबै सम्बन्धलाई छोडेर म एकलाई याद गर्यौ भने कृष्णको राज्यमा आउँछौ। यसमा लाज मान्नु पर्ने त कुरै छैन। बाबाको याद रहन्छ। बाबा यिनको बारेमा पनि बताउनु हुन्छ, यिनले नारायणको पूजा गर्थे, नारायणको मूर्ति साथमा रहन्थ्यो। घुम्दा-फिर्दा त्यसलाई हेर्थे। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– ब्याज त अवश्य लगाइरहनु पर्छ। तिमी हौ नरलाई नारायण बनाउनेवाला। राजयोग पनि तिमीले नै सिकाउँछौ। नरबाट नारायण बनाउने सेवा गर्छौ। आफैंलाई हेर्नु छ– मभित्र कुनै अवगुण त छैन?
तिमी बच्चाहरू बापदादाको पासमा आउँछौ, बाप हुनुहुन्छ शिवबाबा, दादा हुन् उहाँको रथ। बाबा अवश्य रथद्वारा नै भेट्न आउनु हुन्छ नि। बाबाको पासमा आउँछन् रिफ्रेश हुन। सम्मुख बस्नाले याद आउँछ, बाबा आउनु भएको छ लिएर जानको लागि। बाबा सम्मुखमा बस्नु भएको छ त्यसैले धेरै याद आउनु पर्छ। यस यादको यात्रालाई त्यहाँ पनि तिमीले दिनहुँ बढाउन सक्छौ। अच्छा!
१) आफैंलाई हेर्नु छ– मभित्र कुनै अवगुण त छैन? जसरी देवताहरू मीठा हुन्छन्, त्यस्तै मीठो बनेको छु?
२) बाबाको श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मतमा चलेर आफ्नो राजधानी स्थापना गर्नु छ। सेवाधारी बन्नको लागि सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको, स्वर्ग र नर्कको ज्ञान बुद्धिमा चलाउनु छ।
श्रेष्ठ भावनाका आधार मा सबैलाई शान्ति , शक्तिका किरण दिने विश्व कल्याणकारी भव
जसरी बाबाको संकल्पमा, बोलीमा, नयनमा सदा कल्याणको भावना वा कामना हुन्छ, त्यस्तै तिमी बच्चाहरूको संकल्पमा विश्व कल्याणको भावना वा कामना भरिएको छ। कुनै पनि कार्य गर्दा विश्वका सर्व आत्माहरू इमर्ज होऊन्। मास्टर ज्ञान सूर्य बनेर शुभ भावना वा श्रेष्ठ कामनाका आधारमा शान्ति वा शक्तिका किरणहरू प्रवाहित गरिराख तब भनिन्छ विश्व-कल्याणकारी। तर त्यसको लागि सबै बन्धनबाट मुक्त, स्वतन्त्र बन।
मैपन र मेरोपन– यही देह-अभिमानको ढोका हो। अब यो ढोकालाई बन्द गर।